”NIN BAAD TAHAY!” – Booliiska baaritaannada ka wada Muqdisho oo khalad ku qabsaday gabar shaqo u socotey! + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka ”NIN BAAD TAHAY!” – Booliiska baaritaannada ka wada Muqdisho oo khalad ku...
”NIN BAAD TAHAY!” – Booliiska baaritaannada ka wada Muqdisho oo khalad ku qabsaday gabar shaqo u socotey! + Sawirro
(Muqdisho) 02 Abriil 2019 – Gabar ka mid ah deganayaasha Muqdisho ayay maanta arrin la yaab lihi kala qaybsatay Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo ku sheegay inay ”nin tahay.”
Gabadha ay arrintani qabsatay oo la yiraahdo Faa’iso Dhocob ayaa boggeeda Facebook kusoo qortay sidatan:
”Saaka anigoo ku soo wajahan goobteyda shaqo ayaa askari iga dajiyay Bajaaj, wuxuuna i dhahay waa lagaa Shakiyay. Markiiba Saldhiga Bondheere ayaa la i geeyay hal saac waxaa la iga baarayay inaa ahay Nin!”
”Waxee dhaheen naag ma tihid. Gabdhihii saldhigga joogay markii la igu wareejiyay in ay i baaraan koow hanjabaad ayay igu bilaabeen dharka siib.”
”Aniguna waxaan iri ma siibayo baaritaan baad leedahay. Haddaad wax iga garan waydo dhaqtar halla doono i baara. Askari kale iyo gabadh wax baarta waxay taagan yihiin ”ninka cilaan ayaa u marsan.” ayay raacisay qoraalkeeda.
”Hal saac kaddib, ayagoo isku soo dad badsaday ayaa oday askari Saldhigga ka ihi yiri waa dumar waa u gafteen ee iska sii daaya.
Faa’isa oo yaabban ayaa daba dhigtay; ”Saakay guriga Xaajigayga ayaan ka soo toosay. Saakana nin baa tahay lala taagan yahay. Aqoon darrada Xamar taalla way noocyo badan tahay.” ayay Faa’isa qoraalkeeda kusoo afjartay.
Previous articleIlhaan Cumar oo la daba dhigtay (Dacwad lacag lunsi ah oo laga gudbiyey!)
Next articleQM oo lagu eedeeyay inay balaayiin doollar sanad kasta siiso kooxda Al Shabaab!